अरुको बिहेमा मात्र नाच्ने नीता र हरिहरले आफ्नो बिहेमा कहिले नचाउलान् ? – OSNepal
अरुको बिहेमा मात्र नाच्ने नीता र हरिहरले आफ्नो बिहेमा कहिले नचाउलान् ?
Osnepal April 25, 2022 0
काठमाडौँ । नेपाली चलचित्र क्षेत्रका ३ नायिकाहरु रेखा थापा, केकी अधिकारी र वर्षा शिवाकोटीले हल्ला खल्ला नै नगरी जीवनसाथी रोजे । यसबिचमा नायिका त्रयले नै कहिल्यै भनेनन् प्रेममा रहेको कुरा । तर सबै नायिकाले प्रेम विबाह गरे । त्यो पनि परिवारका सदस्यहरुबिच उनीहरुलाई साक्षी राखेर । केकी र वर्षाले मेहेन्दी लगायतका कार्यक्रम गरेपनि नायिका रेखा थापाले भने कोर्ट म्यारिज गरिन् ।
उनीहरु कसैले पनि आफ्नो प्रेम सार्वजनिक रुपमा अभिव्यक्त गरेनन् । प्रेममा रहेर सँगसँगै हिँडेर पनि साथी मात्रै भएको बताउने अर्को जोडी नायिका नीता ढुंगाना र ज्योतीष हरिहर अधिकारीले पनि कुन दिन आफ्ना दर्शकलाई सप्र्राइज दिने हुन् थाहा छैन । उनीहरु केही बर्षदेखि प्रेममा छन्, तर बाहिर हो भन्न डराइरहेका छन् ।
उनीहरुलाई लाग्दो हो कि, हामीले होइन भनेपछि कसैले पनि पत्याउँदैन । जेहोस्, नीता र हरिहरको प्रेम फुलिरहेको छ । करिअरमा ओरालो लाग्दै गएपछि नीता कहिले सिरिज त कहिले फिल्म बनाउन कुरा गर्छिन् । हरिहर पनि नीताको कुरामा साथ मिलाउँछन् ।
एकसाथ काम गर्ने बताउँदै आएको यो चर्चित जोडी हालै धुलिखेलमा आयोजित बिहे समारोहमा सहभागी भए । अरुको बिहेमा धुमधामले नाच्ने यो जोडीले अरुलाई आफ्नो बिहेमा कहिले नचाउने भनेर सोधिएको प्रश्नबाट भने भाग्दै आइरहेका छन् ।